ရဲထွန်း၏ မှတ်တမ်း: February 2013
NLD ပါတီ အား မွတ်ဆင်လင်ဘာသာများလွမ်းမိုးနေဟုဆရာတော် အရှင် ၀ီရသူဝေဖန်
NLD ပါတီ အား မွတ်ဆင်လင်ဘာသာများလွမ်းမိုးနေဟု ဆရာတော် အရှင် ၀ီရသူဝေဖန်
ဒီကနေ့ အဲဒါပဲပေါ့ ဘာပဲလုပ်လုပ် အမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့ အလုပ်လုပ်ကြပါ။ ဘာအမြင်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရမလဲ? အမျိုးသားရေး အမြင်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရပါမယ်ဘုရား။ ဘာနဲ့ အလုပ်လုပ် ရမလဲ? အမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရမယ်။ မျက်စိနဲ့ ကြည့်ရင်လည်း အမျိုးသားရေး အမြင်နဲ့ ကြည့်ရမယ်။ နားနဲ့ကြားနာရင်လည်းပဲ အမျိုးသားရေး အမြင်နဲ့ နားထောင်ရမယ်။ အဲဒီလိုပဲ ဘယ်လိုအလုပ်ပဲလုပ်လုပ် အမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်ရမယ်။ စားလည်း အမျိုးသားရေး အတွက်ပဲစား၊ သွားလည်း အမျိုးသားရေးအတွက်ပဲ သွား။ အေး အရောင်းအဝယ် လုပ်လည်း အမျိုးသားရေးအတွက်ပဲ အလုပ်လုပ်ပါ။
ကျောက်ပန်းတောင်း NLD ငွေအလွဲ သုံးစားသူများကို စုံစမ်း စစ်ဆေး ဖယ်ရှားပေးရန် စာများ ဖြန့်ဝေ
ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီမှ ထွန်းရွှေ ဦးဆောင်သော လူငယ် ၁၀ ဦးသည် မြို့ပေါ်ရှိ လူစည် ကားသော လက်ဖက်ရည် ဆိုင် များတွင် ပါတီ စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက် သူများ နှင့် ငွေ အလွဲ သုံးစား လုပ်သူ များကို စုံစမ်း စစ်ဆေး ပြီး ပါတီမှ ဖယ်ရှားရန် တောင်းဆို သည့် စာမျက်နှာ ၅ ခုပါ သော စာရွက် များကို ၃-၂-၂၀၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ပိုင်း ၈ နာရီမှ ၁၂ နာရီ အထိ လိုက်လံ ဖြန့်ဝေ လျှက် ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
၄င်းစာပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျောက်ပန်းတောင် မြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီရုံးတွင် နေ့လည် ၂ နာရီ အချိန်၌ ပါတီဝင် ၂၅ ဦးခန့်ဖြင့် အစည်း အဝေး ခေါ်ယူ ညှိနှိုင်း ခဲ့ရာ ပြေလည်မှု မရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ ပြေလည်မှု မရရှိ ခဲ့ခြင်းကြောင့် အစည်းအဝေး ကိုရပ်နားကာ လူစုခွဲ ခဲ့ရကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
စာပါ အချက်များတွင် ယခု NLD သည် ယခင် မ.ဆ.လ အတိုင်း လုပ်နေပြီ ဟု၎င်း၊ မြို့ပေါ်တွင် နာမည် ကြီးနေ သော သတင်း တခု ကတော့ အမှုပွဲစား လုပ်၍ ထောင်ကျ နေသူ တစ်ဦးကို နိုင်ငံရေး မှုဖြင့် ထောင်ကျ သည်ဟု ကျောက်ပန်းတောင်း NLD ကထောက်ခံ လို့ လွတ်လာ သည်ဟု ကြားသိ ခဲ့ရကြောင်း၊ ငွေအလွဲ သုံးစား ခြင်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပါတီဝင် များဖြစ် ကြသည့် ဦးနီ၊ ဦးရဲလှ၊ ဦးသန်းဖေ၊ ဦသန်းဝင်း၊ ဒေါ်အေးမြင့်ကြည်၊ ကိုအေးနိုင်၊ ဦးရွေကို တို့အား ရံပုံငွေ ရှာဖွေပြီး ရှင်းတမ်း မထုတ်ခဲ့၍ စစ်ဆေး အရေးယူ ပေးရန် ဟု၎င်း၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ အတွင်းရေးမှူ ဥိးတိုင်အေး နျင့် ခင်မင် ရင်းနီး ခဲ့သော ဦးရွှေကို၊ ကိုအေးခိုင်၊ ကိုဇော်ဝင်း တို့အား ရှုံ့ချပွဲ ကို ကျောက်ပန်းတောင်း NLD ပါတီ အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ပညာရေး ဒါန ပြုလုပ်ရာ တွင် ကျရှင် ဆရာများမှ NLD ပါတီ ဦစီးသည် ဆိုသော စကားလုံးကို မထည့်လိုဘဲ၊ ကျောင်းအမည်ကို ကျူရှင် ဆရာ များဦးစီးသော ပညာ ဒါန ကျောင်းဟု အမည်ပေးရန် တောင်းဆိုမှုတွင် ကျူရှင် ဆရာများသည် NLD ပါတီ ကို ထောက်ခံ သူများ သာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးတိုင်အေး နှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံရေး အမြင် မတူသာ ရှိပြီး မည်သူ့ ကိုမျှ ဒုက္ခ မပေးကြောင်း၊ ဦတိုင်အေးမှ ငွေပေးကာ NLD ပါတီကို ဖြိုခွဲရန်ဟု အပြင် မှာ သတင်း လွှင့်ခဲ့ကြောင်း၊ မိမိတို့ သုံးသော ငွေကို သာရှင်းရန် နှင့် ငွေစာရင်း ကိုတော့ မရှင်းဘဲ သူများ မဟုတ် သည်များကို သတင်း ဖြန့်နေ သည့် ကိုယ်တိုင်က ကိုယ်ရော စိတ်ပါ အောက်တန်း ကျနေ သည့် ကျောက်ပန်းတောင်း NLD များ သတိထား ကြရန်နှင့် မန္တလေးတိုင်း NLD စစ်ဆေးရေး တာဝန်ခံ များဖြစ် ကြသည့် ဒေါ်ဝင်းမြမြ နှင့် ဦးမျိုးနိုင် တို့ လာရောက် စစ်ဆေးခဲ့ရာ စာရင် ရှင်းတမ်း ထွက်ပေး ရန်သာ ပြောခဲ့ကြောင်း၊ ရှင်းတမ်းတွင် ပိုငွေ ၁၆၃၂၅၀ ဟုရေး ထားပြီး ၄င်း ပိုငွေကို ကိုအေးခိုင် ထံတွင် ရှိနေ ကြောင်း၊ ကိုအေးခိုင် ထံမှ ရငွေဟု ရှင်းတမ်းတွင် ထည့် ရေး ရမည် ဖြစ်သော်လည်း ကိုအေးခိုင် ထံသို့ လှူငွေ ဟု ရေးသား ထားသည် မှာ ရိုးသား မှု လုံးဝ မရှိ ဟုထင် မြင်မိကြောင်း ရေးသား ထားသည် ကို သိရှိရပါသည်။
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ဆောမြို့နယ်၊ ကျောက်ထုမြို့နယ်ခွဲ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ ဦးဌေးဝင်း က ပါတီကို နှတ်ထွက်စာတင်ထားသည်ဟု သိရှိရသည်။
နှုတ်ထွက်သည့် အကြောင်းရင်းကို ဦးဌေးဝင်း က ပြောသည်မှာ ၄င်း အနေဖြင့် NLD ပါတီဝင် များအား ဆက်လက်၍ လက်တွဲ မရတော့ခြင်း ပါတီမှာ ပါဝင်တဲ့ သူများ ဟာလည်း ဒေသ ကောင်းကျိုး ဆောင်ရွက်သူများ မဟုတ် ကျေးရွာတွင် အပါယ်ခံ အဖျက်သမား အရက်သမား၊ ချဲသမား၊ အရက် ခိုးချက်သမား၊ စသည်ဖြင့် ဖြစ်နေပြီး အခွင့်ထူးခံသမားများ ပါတီကို ယုံကြည်လို့ ဆောင်ရွက်ကြသူများ မဟုတ်ဘဲ အာဏာလိုချင်သူများဖြစ်နေတယ်။ ဥပမာ ဆိုလျှင် ယခု ကံကြီးကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အရွေးခံရသူ ဦးကျော်ဇေယျဆိုလျင် ယခင်က ဆိုင်းဘုတ်ငါ့အိမ်မှာတင် ငါတို့က ပြည်သူအတွက် အနစ်နာခံမယ် လုပ်မယ်ပြောပြီး ယခု အချိန်မှာတော့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး လည်း အရွေးခံရတော့ ပါတီဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ် ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လုပ်သွားတယ်။ ပါတီကိုအသုံးချပြီး အာဏာယူ သွားတယ်ဟု ပြောသည်။
ဆက်လက်ပြီ ဦးဌေးဝင်းက ပြောသည်မှာ ဆော မြို့နယ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ လည်းဖြစ် ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်လည်း ဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်တင်ကလည်း ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ရေး သူ၏ ဆွေမျိုးတွေကို မြို့နယ်ကော်မတီ၊ ညီလာခံကော်မရှင် ခန့်ပြီ်းလူငယ်တွေနေရာ မပေးပဲ ယခင် လူဟောင်းများနှင့် သူ၏ရွာဖြစ်သော တေးရွာမှ သူ့ဆွေမျိုးများ၊ နှင့် သူနှင့် မျိုးတူရာ တောင်သား လူမျိုးများကို နေရာပေးခြင်း အုပ်စုဖွဲ့ခြင်း လုပ်ပြီး ပါတီ ညီလာခံတွင် သူ့စိတ်ကြိုက် လုပ်ဆောင်သွားခဲ့တယ် ဟု ပြောသည်။
ဆော မြို့နယ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်တင်သည် ဆောမြို့နယ် NLDပါတီ ညီလာခံတွင် လက်ရှိ တက်ကြွစွာပါဝင် လုပ်ဆောင်နေသည့် ကိုသစ္စာ၊ ကိုလှိုင်ထွန်း၊ ဖိုးဇော်တို့အား နေရာ မပေးလိုသည့် အတွက် ယခင် NLD လူဟောင်း သီးကုန်းမှ ဦးရဲမြင့် နှင့်ပူးပေါင်းပြီး လူငယ်များ မပါဝင်ရေး ဆောမြို့နယ် လောင်းရှည်ဒေသကို ကွင်းဆင်း၍ လူငယ်တွေကို မဲမပေးရေး၊ အခွင့်ထူးခံများ ဖြစ်သဖြင့် လူဟောင်းတွေက အတွေ့အကြုံရှိသည့် အတွက် ဦးကျော်တင်ကို မဲပေးရေး ကွင်းဆင်း တိတ်တိတ်စည်းရုံးပြီး တက်ကြွ ဆောင်ရွက်သူတွေကို အရင်ရှင်းခဲ့သည်။ ကျောက်ထုဒေသနှင့် ညောင်ကန်၊ ငှက်ချောင်၊ ကံချောင်းဒေကို သူ၏ ဆွေမျိုးမကင်း တူတော်သူ ဦးကျော်မြင့်မှ ကွင်းဆင်းပြီး ဦးကျော်တင်ကို မဲပေးရေး ဆောမှ လူငယ်တွေကို မဲပေးရေး တိတ်စည်းရုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အဲဒီလို အခွင့်ထူးခံသူတွေ၊ အာဏာလိုချင်သူတွေ အကျင့်ပျက်သမားတွေနှင့် ဆက်လက်ပြီး လက်မတွဲနိုင်တဲ့ အတွက် NLDကျောက်ထု မြို့နယ်ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးနေရာ ကရော ပါတီကပါ နှုတ်ထွက်တာ ဖြစ်ကြောင်း ဦးဌေးဝင်းက ပြောကြားသည်။
NLD ပါတီသည် ရပ်ကွက် / မြို့နယ် / ခရိုင် ညီလာခံများ ပြုလုပ်ကျင်းပပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အာဏာလုမှုများ ၊ သဘောထားကွဲမှုများ ပိုမို ဖြစ်ပွားလျက် ရှိပြီး တစ်ဦးချင်းရော ၊ အဖွဲ့လိုက်ပါ နှုတ်ထွက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။